पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य फेरी बढ्यो, प्रतिलिट १८० सम्म पुग्नसक्ने ! « On Khabar
पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य फेरी बढ्यो, प्रतिलिट १८० सम्म पुग्नसक्ने !
रुस र युक्रेनमा जारी तनावका बीच पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य फेरी बढेको छ । मुल्य बढेसँगै अव प्रतिलिटर पेट्रोल १४४.०८ रुपैया पर्नेछ । नेपाल आयल निगमले दिएको जानकारीअनुसार भारतबाट आज प्राप्त नयाँ मूल्य सूचीअनुसार सबै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको छ ।
भारतबाट प्राप्त नयाँ मूल्य सूचीअनुसार पेट्रोल प्रतिलिटर ३।८९ रुपैयाँ, डिजेल ३।०८ रुपैयाँ र मट्टितेल प्रतिलिटर १०।३० रुपैयाँ बढेर आएको छ । यस्तै, हवाई इन्धन प्रतिलिटर ३।३२ रुपैयाँ र एलपीजी ग्याँस प्रतिलिसिन्डर १०० रुपैयाँ बढेको निगमका प्रवक्ता बिनितमणि उपाध्यायले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।
प्राप्त नयाँ मूल्य सूचीअनुसार अब निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर २०।५२ रुपैयाँ, डिजेलमा १६ रुपैयाँ र एलपीजी ग्याँसमा ६६५ रुपैयाँ घाटा हुने बताइएको छ । यस हिसाबले निगमलाई १५ दिनमा ३ अर्ब ९ करोड र मासिक ६ अर्ब १८ करोड घाटा हुने उपाध्यायले बताए । मूल्य सूची बढेर आएसँगै पेट्रोलको खरिद लागत प्रतिलिटर १६५।५२ रुपैयाँ, डिजेलको खरिद लागत १४४।०८ रुपैयाँ र एलपीजी ग्याँसको खरिद लागत प्रतिसिलिन्डर २२४०।३४ रुपैयाँ पुगेको निगमले जनाएको छ । केही दिन युद्ध लम्बिने संकेत देखिएसँगै पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यबृद्धि थपिने निश्चितजस्तै छ ।
जिउदो मान्छेको मृ -त्युु दर्ता।। मतदान गर्नबाट बन्चित